Sidee badan oo ka taqaanaa Kuwani Spotify-dhimista?
A user kasta oo shirkad ama urur waxaa mar walba doonaysa inay hesho dhaaf iyo wax la mid ah ayaa sidoo kale eegay oo ay users kuwaas oo la isticmaalayo adeegyada music kasta oo shirkadda iyo mahad Spotify si ay u ogaadaan isbeddellada user guud oo sidaas daraaddeed iyaga waxaa had iyo jeer la soo baxdo dhimis in yihiin kuwa ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay si loo hubiyo in user waxaa soo jiitay oo Qarka shaqada soo gashay waa hubaal. Waxaa jira liis dheer oo qiimo dhimis in user a waa inuu ogaadaa si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay shirkadda iyo sidoo kale qalabka loo isticmaalay.
Noocyada dhimis Spotify iyo khilaafaadka
Sida lagu Xusi, waxaa jira liis dheer oo qiimo dhimis iyo ololayaal in lagu maamula shirkadda xataa marka la qoraayo tutorial iyo sabab la mid ah sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka adeegyada tahay in waxaa loo riyaaqay. Si kastaba ha ahaatee waxaa suurtogal ma aha in ay taxdo dhamaan dhimis halkan iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in ay qiimo dhimis ugu sareysa in ay raaxaystaan ​​dadka isticmaala ee la soo sheegnay doonaa sharaxaada waxaa weeye in la hubiyo in user helo mid ka mid ah uu jecel yahay iyo kuwa kale diidaa . Waxaa kale oo uu saamaxayaa user si loo hubiyo in diinta la xukumo hab ugu fiican. Ka dib waxaa liiska arrintan la xiriira in la soo raacday si aad u hesho sida ugu fiican ee isticmaala:
1. Trial version dhimis
2. 60 maalmood dhimis free
3. Dhimis Ardayga
4. 0.99 dhimis
5. 30 maalmood ka hari
6. Dhimis 3 bilood
Dhimis version 1. Trial
Waa nooca ugu badan ee sicir-dhimis oo uu soo tarin by users ah muddo waqtiga iyo sabab la mid ah ay sidoo kale kor u ugu fiican oo gobolka ka mid ah farsamooyinka tahay si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan arin kasta iyo dhibaato. Si aad u hubiso in sicir-dhimista waxaa tarin user xaqa u baahan yahay inuu saxiixo xisaab premium in shaqo lagu sameeyey heli dhigi:
Sidoo kale waa mid ka mid ah qurbaan ugu fiican in loo sameeyay in ay macaamiisha ku nool meel ka baxsan UK iyo USA oo aad rabto in la hubiyo in xisaabta Spotify loo abuuray in lagu sameeyey shaqada. Waxaa la t in la xuso in dadka deegaanka ay waa in mid ka mid ah dalalka halkaas oo Spotify waa inuu xaqiijiyo in adeegyada la siiyo:
3. dhimis Student
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka adeegga tahay in la adeegsado ardayda keliya ee si aad u hubiso in ay hesho heshiis iyo natiijooyinka ugu fiican ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in account premium waxaa ay kor u saxiixay in la hubiyo in dalab la tarin oo aan wax arrintan oo dhibaato sameeyo. Si aad u hesho dhimis arday ardayga waa in ay booqdaan URL https://spotify.sheerid.com/ in shaqo lagu sameeyey si fudud oo ku qanacsan aad u hesho:
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka adeegyada tahay oo ay bixiso shirkadda si loo hubiyo in uu yahay in user la wada cafiyo oo uu helo ugu fiican ee wax waqti ah gudahood oo dhan. Waa dalab in ay sidoo kale hubineysaa in maalmaha fasaxa ah dadka isticmaala ay ka samaysan yihiin cabsi badan oo ay ka heli caymiska Spotify muddo 3 bilood oo kaliya 0.99 bishii. Waxaa sidoo kale in la xusay in qorshahan ayaa waxaa sidoo kale la bixiyo si dadka isticmaala cusub iyo sidoo kale in la hubiyo in ay sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka hesho oo ay daacad u ahaadaan shirkadda sidoo:
5. 30 maalmood dhimis
Waa magac kale oo la siiyay in ay 30 maalmood oo tijaabo ah oo lacag la'aan ah oo ah lacagta caymiska marka ah calaamadaha macaamiisha cusub. Waxaa sidoo kale in la xuso in mar kale tani waa dhimis ku haboon oo loo isticmaalo kaas oo macaamiisha ayaa sidoo kale og oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo adeegyada ugu fiican oo ugu dambeyntii u saxiixay ilaa 9.99 ee bishii digsiga in loo soo bandhigay shirkadda arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo gobolka adeegyada farshaxanka gebi ahaanba bilaash ah ee 30 maalmood ee ugu horreeya,
Dhimis 6. 3 bilood
Dalab Tani waxay u ogolaaneysaa user si aad u hesho dhimis ku xusan qorshaha caymiska oo aan arin kasta iyo 3 bilood ee soo socda user ku raaxaysan karaa lacagta caymiska ee $ 1 oo kaliya bishii aan ka kaaftoomi kasta. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka ee kharashka ugu yar iyo ugu danbeyn u hesho heshiisyo ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira shirkadda music uruursanayey sare iyo sidoo kale. Spotify ayaa had iyo jeer la soo baxdo heshiis fiican oo sabab la mid ah sidoo kale waa dhacdooyinka taxane ah ee la mid ah
Magaca iyo ton
Play iyo ururka aad MP3
Dhimis version Trial
60 maalmood dhimis free
Haa No Haa Haa No
Haa No Haa Haa Haa
Haa Haa No Haa No
30 maalmood dhimis
Dhimis 3 bilood
> Resource > Spotify > Sidee badan aad ka ogaato ku saabsan Spotify-dhimista?